दुविधाकाे स्थितिबाट कसरी बाहिर निस्कने ? जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
दुविधा भरिएकाे दिमागले हामी अाफ्नाे लक्ष्यमा केन्द्रित हुन सक्दैनाैँ । दुविधा बढ्दै गएमा त्यसले अनावश्यक तनाव बढाउँदै मानशिक राेग समेत निम्त्याउन सक्छ ।
के तपाइ दुविधाकाे स्थितिमा हुनुहन्छ, यसबाट बाहिर निस्कन सहयाेग गर्ने केही उपायहरू यसप्रकार छन्
सबैभन्दा पहिले त अाफ्नाे जिवनका प्राथमिकताहरू छुट्टाउनुहाेस् । जब तपाइ अाफ्ना प्राथमिकताहरू बारे स्पष्ट हुनुहुन्छ, तब तपाइलाइ निर्णय लिन सहज हुन्छ । तपाइ अाफ्रले चाहेकाे कुरामा दृण बन्नुहुन्छ ।दुविधामा भएकाे सकयमा अाफुसँग भएका विकल्प, या कुन कुन कुरालाइ लिएर दुविधामा हुनुहुन्छ, ति कुराहरूलाइ डायरीमा टिपाेट गर्नुहाेस् ।
अब ति कुराबाट हुने फाइदा बेफाइदा, चुनाैति र भविष्यका सम्भावनालाइ लेख्नुहाेस् । त्यसपछि कुन तपाइकाे लागी उपयुक्त हुन्छ भन्ने मुल्याङ्कन गर्नुहाेस् ।भावनामा बगेर, दुविधा लिएर नबस्नुहाेस् । दिमागले पनि साेच्नुहाेस् । दिर्घकालीन कुरालाइ ध्यानमा राख्नुहाेस् ।अाफ्नाे अभिभावक या साथिसँग कुरा गर्नुहाेस् ।
अाफुसँग भएका विकल्प बताउनुहाेस् । त्यसकाे लागी सिधै भन्न सक्नुहुन्न भने, उदाहरण जस्ताे बनाएर, अरूकाे समस्या जस्ताे बनाएर पनि बताउन सक्नुहुन्छ । त्यसपछि उनिहरूकाे धारणा बुझ्नुहाेस् । यसाे गर्नाले निर्णय लिन ठुलाे सहयाेग पुग्नेछ ।काम, करियर अादिलाइ लिएर दुविधामा हुनुहुन्छ भने अाफुसँग भएकाे विकल्पहरूकाे बारेमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी लिनुहाेस् ।
यसकाे लागि पुस्तक, सेमिनार, इन्टरनेट या त्याे क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्पाक्ति तपाइकाे लागी सहयाेगी बन्न सक्छन् ।धेरै जसाे समय हामी अरूकाे खुसी र अाफ्नाे खुसिका दुविधामा पर्छाैँ । अाफुलाइ, अाफ्नाे खुसि र अाफ्नाे रूचिलाइ पनि महत्व दिनुहाेस् । अरूले के भन्लान भन्ने कुरालाइ कम महत्व दिनुहाेस् । ख्याल राख्नुहाेस् कि, तपाइले लिने निर्णयले तपाइकाे जिवनमा दिर्घकालीन असर पार्ने छैन ।
जीवनभर खुसि रहन चाहानु हुन्छ भने अपनाउनुहोस यी सजिला तरिका : कहिल्यै दुखि तुल्याउदैन
भर्खरै सार्वजनिक एक अध्ययनले विश्वको सबैभन्दा बढी खुसी देश नर्वेलाई ठहर्‍याएको छ ।त्यहाँ मान्छे किन खुसी छैनन् ? किन अमेरिका खुसी देश परेन ? यसको अर्थ हो खुसीको स्रोत धन मात्रै होइन रहेछ ।हामी भित्र सकरात्मक र नकारात्मक गरी दुई प्रकारका भावनाहरु छन् ।सकारात्मक भावनामा भावनामा प्रेम, आदर, अनुग्रह, आनन्द पर्छन् ।
नकरात्मकमा घृणा, रिस, इर्श्या, इख, गुनासो आदि पर्छन् ।सकरात्मक भावनले हामीमा ऊर्जा बढाउँछ । खुसीको सञ्चार गराउँछ भने नकरात्मकले दुःखी बनाउँछ । त्यसैले हामी अभावका कारण दुःखी होइन, हामीमा रहेका नकरात्मक भावनालाई बढवा दिएर दुःखी भइरहेका छौं ।शाररिक रुपमा रोग लाग्यो वा समस्या आयो भने हामी आफैं थाहा पाउँछौं तर मनमा समस्या आयो भने थाहा हुँदैन ।
विस्तारै गाँज्दै लगेर डिप्रेशनतिर धकेल्छ । मान्छेमा नकरात्मक भावना बढी आउन थाल्यो भने मन समस्यामा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । समस्या आउन नदिन तिनलाइ नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।हाम्रा धर्म संस्कृतिमा मनलाई स्वस्थ राख्नकै लागि केही अभ्यास गर्ने गरिएका छन् । तर, हामीले तिनलाई पनि छाडेपछि मन अस्वस्थ हुँदै गइरहेको हुन्छ ।
मन बिगारेर डिप्रेशनसम्म धकेल्ने केही तत्व यसप्रकार छन्ः
1.अहम् खुसी रोक्ने सबभन्दा ठूलो शत्रु हो । अहमका कारण मान्छे फस्दै जान्छ र डिप्रेशनमा पुग्छ । अहम् म मात्रै यस्तो, म मात्रै उस्तो भन्ने एउटा प्रकारको भयो । अर्को मैले यसो गर्न सकिनँ, त्यसो गर्न सकिनँ भन्ने हुन्छ । यसले आत्मग्लानी महशुस गराउँछ । त्यसपछि ऊ विस्तारै अरु र आफैंसँग झिँझिँन थाल्छ । मनमा अनेक कुरा खेल्न थाल्छन् । त्यसपछि आफूलाई दोषी ठहर्‍याउँछ । यसरी डिप्रेशनको शिकार भइन्छ।
2.गुनासो जब मान्छेमा गुनासो गर्ने बानी बढ्दै जान्छ । यसले पनि मनलाई अस्वस्थ बनाउँछ । उसमा फलानो यसो गरिदिएन वा यसो भएन भन्ने खालका भावना आउँछन् । यसले मन दुखाउँछ । आत्मबल कमजोर बनाउँछ । फलानाले यसो गरेन किन त्योसँग बोल्ने भन्ने खालका भावना आउँछन् । यसले उसलाई एक्लोपनतिर धकेल्छ । विस्तारै मनमा कुरा खेलिरहने, टाउका दुख्ने, लगायत हुँदै जाँदा डिप्रेशन हुन्छ।
3.इख इखले पनि आफैंलाई समस्यामा पार्ने हो । त्यसले आफूमाथि भएका खराब व्यवहार वा आफूलाई भएको हानी सम्झाइरहन्छ । यसो हुँदा मन दुखिइरहन्छ । उसले यस्तो गरेको थियो, त्यसलाई यस्तो गर्छु खालका भावना आइरहन्छन् । यसले रिस बढाउँछ । अन्तमा हानी मनलाई नै गर्ने हो।
4.रिस हामी धेरैपल्ट यत्तिकै रिसाइरहेका हुन्छौं, रिसाउनुपर्ने कारण हुँदैन । तुरुन्तै आवेशमा आएर बाझिहाल्छौ । किनभने हामी भित्रभित्रै तातिरहेका हुन्छौं, केही कुरामा ठोक्किनै हुँदैन रिसाइहाल्छौं । हामी कोही रिसाउँदा मसँग रिसायो भन्ने ठान्छौं । तर, ऊ आफैंसँग रिसाएको हो । ऊ भित्र पीडा, तनाव, आवेग आदिको बोझ छ । त्यो उतारेको हो ।
1.सहयोगी बन्ने सहयोग पाउनेलाई भन्दा दिनेलाई फाइदा पुग्छ । तपाईंले कसैलाई पाँच रुपैयाँ दिँदा त्यो पैसाले उसले के गर्ला ? कति फाइदा होला ? तर, तपाईंलाई भने त्यति दान गर्दा पनि धेरै खुसी मिलिरहेको हुन्छ। जुन हजारौं खर्च गर्दा नमिल्न सक्छ ।
2.माफ गर्ने माफी आफू र अर्को दुबैलाई गर्नुपर्छ । कहिलेकाहिँ आफूले भुलवश वा आवेशमा आएर केही बिगार गरिएको हुन्छ । आफूले गरेको उक्त गल्तीका कारण पिरोलिरहने समस्या हुन्छ कतिमा । तर, आफूले अरु कसैको केही बिगारेको भए उससँग माफी माग्ने र आफूले आफैंलाई पनि गल्ती नदोहोर्याउने गरी माफी दिने गर्नुपर्छ ।
यसैगरी कसैले अन्जानमा गरेको गल्तीमा पनि माफ दिन सक्नुपर्छ । यसले मनलाई हल्का बनाउँछ । त्यसो गर्न सकिएन भने मनमा बोझ बढ्छ र बोझ बोकेर हिँड्दा समस्या त आउँछ नै ।
3.धन्य हुने मानवमा जति भए पनि नपुग्ने स्वभावको विकास हुँदै गएको छ । तर, आफूले प्राप्त गरेका कुरामा धन्य हुनु पनि मनलाई आराम दिन महत्वपूर्ण तत्व हो । जस्तोः एक गिलास पानी पिउन पाइयो भने पनि धन्य हुनुपर्छ । मैले यति त पाएँ भन्ने खालको महशुस गर्न सक्नुपर्छ । कसैले गरेको सानो सहयोगमा पनि कृतज्ञ हुनुपर्छ ।
4.स्वीकार्य जे भयो भइहाल्यो भनेर स्वीकार्नुपर्छ । किनभने अस्वीकार गर्दा असन्तोष मात्रै बढ्छ फाइदा हुँदैन । मान्छेहरु अचेल असन्तोषी बन्दै गएका छन् । लामो नाक हुनेलाई लामो भएको मन पर्दैन, छोटो हुनेलाई छोटो । कालो भएँ, गोरो भएँ, होचो भएँ, अग्लो भएँ जस्ता कुरामा असन्तोष देखिन्छ । यो भनेको आफूलाई नस्वीकार्नु हो । आफूसँग्ग भएको कुरामा चित्त नबुझाउनु हो ।
5.उदारता समान्य उदाहरण प्रस्तुत गरौं, लट्ठी अलिकति बंग्याउने खोज्यो भने भाँचिन्छ तर रबर जति बंग्याए पनि हुन्छ र छाड्ने बित्तिकै आफ्नै स्थितिमा आइपुग्छ । यसको अर्थ मन पनि जति कडा बनाइयो, त्यति नै भाँचिने सम्भावना अधिक रहन्छ । त्यसैले हामीले मन स्वस्थ राख्न वा भाँचिन नदिन उदार हुन जरुरी हुन्छ । ‘म झुक्दै नझुक्ने नेपालीको छोरो’ मानसिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ बरु ‘फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र’ सही हुन्छ ।
Don't Miss it सकारात्मक सोंच, सफलताको आधार : प्रेरक भनाइहरु
Up Next बन्दागोभीको पत्रपत्रले फ्याल्ने रहेछ, हाम्रो सातपत्रका रोगहरु । खान जान्नुहुन्छ तपाई ? सिक्नुहोस्